जब पत्रिकामा आफैलाई श्रद्धाञ्जली दिएको देखिन्छ… – Sadarline
रोल्पाका विद्यार्थीलाई पढाइमा सास्ती
प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी, राजधानी भालुवाङ कायम
सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवसहित ३ जना त्रिशूलीमा वेपत्ता
एमाले बाँकेको अधिवेशन : लोगो सार्वजनिक
१२ मंसिर २०७३, आईतवार ०५:५३
विहानको समय, पत्रिका हेर्छु ‘मनमनै सोच्छु, सधैं यस्तै न्यूज आउ, आन्दोलन, पक्राउ, चोरी, डकैती । राम्रो समाचारको त दिनै नहुने भयो । पत्रिका पल्टाउदै जाँदा एउटा पेजमा मेरा आँखाहरु टक्क अडिन्छन् । कस्तो मेरो जस्तै तस्बिर १ ठ्याक्कै अनुहार त मसंगै मिल्ने रहेछ १ नियालेर हेर्छु, मै पो रहेछु त १ तर यहाँ किन रु अति हुन्छ नि १ मेरो फोटो अनि समबेदना शीर्षकमा १ गजबै छ बा, जोक गर्नुपनि चाहिने कुरामा १ म नमरेको मान्छेको फोटो समबेदनामा किन रु हिजो राति सुत्नु अगाडि छातीमा अलिअलि दुखेको महसुस त भएको थियो, त्यसपछि त मस्त सुतेकैे जस्तो लागेको थियो । बिहानको झण्डै नौ बज्नै लागेछ । उफ्, आज त कति ढीला उठेछु। यो टाउको पनि कस्तो दुखेको, हिजो अलि बढी नै पिइएछ कि कसो, आज एकदिन, आज एकदिन भन्दै लगातार पिएको पनि यसपालि त हप्तै भइसकेछ । खै मोबाइल कता राखेछु रु आज त यो रमेशलाइ नथर्काइ भएन ।
एक महिनाको लागि भनेर लगेको १० लाख ३ महिना भइसक्यो, फर्काउने त सुरसारै छैन त । ए, मेरो पीएलाई पनि सम्झाउनुपर्ने, भन्सारबाट सामान छुटाउनुपर्ने । यो भन्सारको मान्छे पनि साहै्र टेन्सन दिन्छन् भन्या । १ करोडको सामान भन्सारमा थन्केको पनि १० दिन भइसक्यो, घाटै घाटा । हैन, खै मेरो ब्रेकफास्ट भन्या । वहाँ अफिसमा विहानैदेखि नयाँ स्टाफको इन्टरभ्यू लिनु छ । त्यो इन्डियाको पार्टीलाई पनि आजै टाइम दिएको छ क्यारे । कति काम भनेको, साह्रै टेन्सन हुन्छ भाइ कहिलेकाहिँ त । धन्न त्यो मलेसियाको पार्टीलाई चाहिँ अर्को हप्ता मात्रै आउनु भनेर भनेछु । अनि त्यो कलेजको संचालक समितिको बैठक पनि ३ बजे भन्दैथियो कि कसो १ त्यो मन्त्रालयमा पनि आजै बोलाएको जस्तो लाग्याथ्यो, त्यहां त आजै जानुपर्छ ।
अनि त्यो अस्ति सप्लाई गरेको सामानमा पनि के समस्या पर्यो भन्ने सुनेको थिएँ के गर्नु, जतापनि आफै नभइ नहुने। स्टाफ मात्र बढी राखेर के गर्नु, कसैले चित्त बुझ्ने गरि काम गर्ने होइन, सबै आफैले हेर्नुपर्छ। हरेक दिन यस्तै हो मेरो, कामै काम। शनिवार त छुट्टी लिउँ कि भनेको, कामैले पोल्छ । बरु स्टाफहरु छुट्टी लिएर रमाइलो गर्छन्, आफू चाहिँ छुट्टी लिनै नमिल्ने । मोबाइलमा घण्टी बज्छ, पीएको फोन रहेछ । ‘सर, आज ४ बजे डाक्टरसंग अपोइन्टमेन्ट फिक्स छ ।’ ए, हो रु यति धेरै काम छ अब कहाँ डाक्टरकहां गइराख्ने रु मलाई केही भएको पनि छैन । अब एक हप्तापछिको टाइम लिउ न है ।’ ‘सर, अस्ति पनि सारेको एप्वाइन्टमेन्ट, एकचोटि चेकअपलाई जांदा ठिकै होइन र रु ऊ भन्छ । ‘त्यो त ठीकै हो, अस्ति अलि अलि बीपी बढेको थियो । टाउको पनि दुखेको थियो । अहिले ठीकै छ फेरि त्यो डाक्टरकहाँ गयो भने यो चेक त्यो चेक गरेर दिनभरि नै लगाइदिन्छ । यत्रो काम छोडेर कहाँ डाक्टरकहाँ गइराख्ने । अब कामसाम अलि कम भएको बेला जांउला नि’ म भन्छु । छोराको स्कूल जाने समय भइसक्यो, आज किन उठ्दैन । बोलाउंदा पनि सुन्दैन त । हैन आज के भयो, मेरो घरमा बिहानैदेखि चहलपहल छ, घरमा केही कार्यक्रम भएको जस्तो त लाग्दैन ।
गाइगुइँ पनि बढी नै छ भनेको… आज एकाविहानै के भयो मेरो घरभरि मानिसहरु । हैन, बाहिर गएरै हेर्नुपर्यो। बाहिर देख्छु, करीब २०, २५ जनाजतिको भेला पो छ त । सबैको अनुहार मलिन देख्छुु । कसैको आँखा रसिलो देखिन्छ । मेरी छोरी मात्रै हो केही मतलब नभाको । ३ बर्षकी उसलाई कसैको केही मतलब छैन । सधैंजसो खेलौना हातमा लिएर दौडिरहेछ यताउता । नानु, यता आऊ । सधैं मलाई देख्नासाथ बाबा भनेर आउने मेरी छोरी आज मतिर हेर्दिनन् । नानु, म बेस्सरी करांउछु, तर उ सुन्दिनन्। म दौडदै गएर उसलाई च्याप्प समात्छु । तर ऊ समातिदैन । अलि पर देख्छु, सेतो कपडामा बेरिएकी एक महिला । न चुरा, न पोते कुनै श्रृंगार विनाका । हैन यी को हुन् मेरो घरमा। नजिकै जान्छु र नियाल्छु… शिल्पा ?? मेरी श्रीमति ! हैन यो सबै के हो रु श्रीमतिकै छेउमै गएर सोध्दा पनि सुन्दिनन् त । अझ देख्दा पनि देख्दिनन् त । लौ, आज त अचम्मै भएछ। आज बिहानैदेखि अचम्मै देख्नु परिरहेछ, खै के भा के भा । अर्को कुनामा हेर्छु, अलि बढी नै मानिसहरु घेरा हालेर बसेका छन ।के रहेछ त्यहाँ रु हेर्नैपर्यो… ओहो, यहा त एउटा लाशलाई पहेंलो कपडामा बेरेर बांसमा सुताएको पो रहेछ । कस्को हो कुन्नि । हेर्दा त लोग्ने मानिसकै जस्तो छ त नजिक गएर नियांल्छु । अरे, यो त आफ्नै लाश पो रहेछ । अचम्म, म त यही छु त, मेरै लाश कसरी यहाँ । ‘ओहो, के म मरिसकें रु म मुटु चिसो भएको अनुभव गर्छु । उफ् होइन के हो योरु के म सांचिकै मरिसकें रु खलखल पसीना छुटिरह्यो । मुटुको धड्कन अधिकतम रफ्तारमा धड्किरहेछ । यता जाउँ कि उता जाउँ रु, के गरुं कसो गरुं रु कसलाई भनुँ, हे भगवान यो के देख्नुपर्योरु चिच्याउन मन लाग्छ, कराउन मन लाग्छ। हैन, कसरी हुनसक्छ यस्तो रु मेरो मर्ने उमेर भएकै छैन ।
भर्खर ४५ बर्ष, त्यो पनि खासै केही रोग नलागेको हट्टा कट्ठा मान्छे, म कसरी मर्नसक्छु रु सानी छोरी दौडदै आमाको छेउमा गएर सोध्छे, ममी, आज बाबालाई किन त्यहां सुताएर राखेको रु बाबा किन बोल्नुहुन्नरुरु मेरी श्रीमति मौन रहन्छे, मृत शरीर जस्तै । म त मरिहांले अब यो मेरो लालाबालालाई कसले हेर्छरु आफ्नो परिवारको मायाले मलाई झल्यांस्स बनाउंछ। थुक्क म। आफैलाई धिक्कार्छु । मेरा छोराछोरीले बाबासँग समय बिताउन चाहेको पनि पुरा गर्न सकिन । हुन्छ, हुन्छ भन्दै फकाएर राखेको पनि १ बर्षै कटिसकेछ । छोरा त झन् १० बर्षकै भइसकेछ, ४ हो कि ५ मा पढ्दैछ क्यारे । कसरी हुर्के, कसरी बढे मलाई केही थाहै भएन । छोराको पढाई राम्रो भएन भनेर स्कूलबाट कम्प्लेन आएको थियो रे । टिचरलाई भेट्न बोलाएको पनि जान पाइएन । मलाई झलझली याद आउँछ, मेरी श्रीमतिले पनि आफ्ना इच्छा पटक पटक व्यक्त नगरेकी होइन, तर त्यो पनि हुन्छ हुन्छ भन्दै टारेको झण्डै २ वर्ष भएछ । पछि पछि त मेरो बानी देखेर होला भन्न पनि छोडेकी थिई । म निराश हुन्छु।
जिन्दगी पैसा भनेरै कटाइयो, रमाइलो मोज मस्ती, साथीभाई, काम र मदिरामै मस्त । न श्रीमति, न बच्चाबच्ची, न घरपरिवार, न शनिवार, सधैं कामै काम । आज मसंग करोडांै छ तर मेरो छोराछोरीले, श्रीमतिले भनेको जस्तो बाबा, लोग्ने हुनसकिन । मेरा आंखाबाट आंसु झरिरहन्छन् । म सम्झिन्छु, मेरा वृद्ध बाबाआमा। उहांहरुले पनि कस्तो भाग्य लिएर आउनुभएका, आफ्नै आंखा अगाडि आफ्ना सन्तानको लाश देख्नुपर्ने बाध्यता । यो भन्दा बढी दुःखको क्षण अरु के नै हुनसक्छ ररु मेरो आमा सुगरको विरामी, बुबाको प्यारालाइसिस भएर खाटमै पर्नुभएको बर्षौं भइसक्यो। औषधीले नै बचाएर राखेको छ। ओहो, नजिकै बसेर कुराकानी गर्नु त परै जावोस् मैले बुबा आमालाई चेकजांचको लागि नलगेको पनि धेरै भइसकेछ। धन्न मेरी श्रीमति, उसैले सबै धानिरहेकी रहिछिन्। बालबच्चाको स्याहारसुसार, पढाइलेखाई, घर व्यवहार, सासू ससूराको उपचार। मैले त घरको लागि के नै गरेको रहेछु र रु मैले के के न गरेंजस्तो लाग्थ्यो, पैसै कमाउने बाहेक के नै गरेको रहेछु र रु मलाई एकदम पश्चात्ताप हुन्छ ।
मैले कहिले आफूले घरपरिवारप्रति दायित्वबोध गरिनँ । सधैं आफ्नै धुनमा मस्त म घरपरिवार कसरी चलिरहेछ, कुनै जानकारी नै राखिनँ । आफ्नी श्रीमतिलाई कहिल्यै धन्यवाद भनिनँ । उसको इच्छा, चाहना के छ कहिले सोधिनँ । सबै घर सम्हाल्न उनलाई कत्तिको गाह्रो भयो, उसको सन्चो बिसन्चो कहिले सोध्ने समय भएन । म बाहिरै व्यस्त रहें, ऊ भित्रै । राति अवेला घर आउँदा ऊ धेरैजसो सुतिसकेकै हुन्थी । बिहान मलाई हिँड्न हतार हुन्थ्यो । कतिखेर कुरा गर्ने रु हामी बीच राम्ररी कुरा नभएको पनि झण्डै २ महिना भइसकेछ । मेरा बच्चाहरु मसँग खेल्न चाहन्थे, बाहिर घुम्न जान चाहन्थे, मेरो आत्मियता चाहन्थे । तर खै मैले त के नै गरेको रहेछु ररु कसैलाई बच्चा बच्ची नभएर संसारभरि भाकल गर्दै हिंड्छन्, म आफू चाहिं भगवानले दिएर पनि सन्तानसुखबाट बिमुख भएर हिडिंरहें, पैसा कमाउने धुनमा । यस्तै व्यस्त जीवनमा आफूलाई दौडाइराखें, न खानाको ठेगान, न सुत्नको, न विदा, न रमाइलो। शरीरमा गह्रुंगोपना, कता कता सास फेर्न गाह्रो भएजस्तो, ढुकढुक बढेजस्तो, छाती भारी भएजस्तो बेलाबेलामा नभएको त कहां हो र, तर भोलि भोलि भन्दा भन्दै डाक्टरकहाँ जाने दिन कहिले आएन। डाक्टरकहां नगएपनि आफैले पनि रगत, ब्लडप्रेसर आदि त चेक गर्न सकिन्थ्यो नि। तर त्यति गर्न पनि समय निकँल्न सकिएन। यो बीचमा स्वास्थ्यको कुरामा चाहिं हुनुपर्नेजति गम्भीर नभएकै हो। ‘के गर्नुु, सानै उमेरमा बित्नुभयो, साह्रै असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो’, छेउमा एकजना भन्दैथिए। डाक्टरले त भन्दैथियो, ‘तपाईको प्रेसर एकदम हाइ छ । सबै जाँच गरेर औषधी नियमित खानैपर्छ’ छेउमै रहेका मेरो मिल्ने साथी केशव अरुलाई भन्दैथियो, ‘जा न एकचोटि जाँच गर भनेको मान्दै मानेन । रक्सी, चुरोट छोड्नुस्, तनाव कम गर्नुस् भनेर पनि डाक्टरले भन्दैथियो । अनि एकचोटि त सुगर पनि हाइ देखेको कुरा पनि गर्दैथियो । भनेकै नमानेपछि कसको के लाग्छ रु पक्कै पनि यसलाई हर्ट अट्याक नै भएको हुनुपर्छ, नत्र हिजोसम्म चल्तापूर्जा मान्छे यसरी भुतुक्कै कहां मर्छ र रु’ मलाई सबै कुरा याद आउँछ । आफूलाई कुनै लक्षण नभएपनि एकचोटि जाँच गराउँ न त भनेर गर्दा सुगर बढेको पाइएको थियो। डाक्टरले फेरि फेरि जाँच गरेर औषधी खान पनि पर्नसक्ने भनेको थियो। तर फेरि फेरि जाँच गर्ने फुर्सद कहिल्यै पाइएन ।
शरीरको वजन दिनानु बढ्दै थियोे, खानपानमा कुनै नियन्त्रण गर्नसकिएन । विजनेसको साथसाथ मदिराको सेवन पनि बढ्दै गयो । एकचोटि छातीमा गहुं्रगो भएको थियो, एकदमै डर लागेर डाक्टरकहाँ पुग्दा प्रेसर बढेको अनि सुगर, किड्नी, कोलेस्ट्रोल तथा मुटुको जाँच गर्नैपर्ने भनेका थिए । त्यसदिन डाक्टरको साधारण उपचार पश्चात शरीरमा आराम भएकोले पछि आउँछु भनेर आएको थिएँ । तर पछि कहिले गइएन । एकदिन बाटोमा सोही डाक्टर भेट्दा फेरि चेतावनी दिँदै भनेका थिए । सुगर, प्रेसर भनेका एकदम खतरा रोग हुन्, यस्तै हेलचेक्र्याइँ गर्दै जानुभयो भने कुनैपनि बेला प्यारालाइसिस हुने, अन्धो हुने, किड्नी खराब हुने र हर्ट अट्याकै हुने सम्भावना रहन्छ है । आफूलाई त्यसबेला केही गाह्रो भएको थिएन, त्यसैले डाक्टरको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइयो । नभन्दै हिजो राति त राम्रै सुतेको थिएँ । भला नशा अलि बढी भएकै हो । तर छातीमा कता कता दुखेको त अनुभव भएको थियो है । यस्तै हो, ग्याष्ट््िक होला भन्दै वास्ता गरिएन, मेरो मृत्यु सांच्चिकै हर्ट अट्याकले नै भएको हो कि कसो रु मलाई मर्न मन छैन, मेरो धेरै जिम्मेवारी छन्, मलाई एकचोटि मेरा आमाबुबा लाई राम्रोसँग हेर्न रहर छ ।
मेरी श्रीमतिले गरेका त्यागहरुको लागि धन्यवाद भन्नु छ । परिवारलाई समृद्ध बनाउने उसको इच्छालाइ मैले पूरा गर्नुछ । मेरा छोराछोरी जसले सधै बाबाको आश गरे । उनीहरुसंग धेरै समय विताउने इच्छा छ । भगवानले दिएका अमूल्य जीवन, त्यो भन्दा अमूल्य मेरो परिवार अनि परिवार भन्दा पनि अमूल्य आफ्नो स्वास्थ्य । मैले बल्ल बुझें भगवान् । हे भगवान्, केवल एक मौका देऊ । मैले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महसूस गरें । कामै मात्र जिन्दगी होइन रहेछ । पैसै मात्र संसार होइन रहेछ । यो अमूल्य जीवनलाई एकपटक फेरि नियाल्न चाहन्छु । केवल एक मौका देऊ, म फेरि असल पिता, पति र छोराको रुपमा सबैको सेवा गर्न चाहन्छ ु। केवल एक मौका । होइन किन कराउनुभएको रु नराम्रो सपना देख्नुभो कि कसो रु खलखली पसिनै पसिना छ त शरीरभरि । मेरी श्रीमतिको आवाजले म झसंग भएर विउझिन्छु, म त दुइ हात जोडेर एउटै रट लगाइरहेको रहेछु । केवल एक मौका भगवान, केवल एक मौका । स्वास्थ्यखबरबाट साभार
सदरलाइनडटकम, १२ मंसिर, नेपालगन्ज : अञ्चल प्रहरी कार्यालय भेरीका प्रमुख तथा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक धिरु बस्न्यातले नागरिक र प्रहरीको सहकार्यले मात्र अपराध निर्मूल पार्न सकिने बताएका छन् । उनले अपराध र अपराधीको कुनै देश, जाती, धर्म नभएको बताउदै नागरिक प्रहरीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको समेत औल्याए । ईलाका प्रहरी कार्यालय हिरमिनियाको […]
१९ माघ २०७५, शनिबार १७:५३
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१६